Zarangollo recette miaraka amin'ny Thermomix, mahazatra an'i Murcia | ThermoRecipes
Zarangollo - Atody miady miaraka amin'ny tongolo, atody ary zucchini
Androany zarangollo. Fantatrao ve ity lovia ity? Raha avy any Murcia ianao na efa teo, dia holazainao amiko mazava ho azy. Ho anao izay mbola tsy nandray izany dia mamporisika anao aho hanandrana.
Izy io dia vita amin'ny akora ara-pahasalamana, tsotra sy manankarena ary, mazava ho azy, avy amin'ny zaridaina Murcian. Karazan'izany Nihazakazaka mifototra zucchini, tongolo sy atody. Inona no mahasoa azy?
Hilaza amiko ny Murcians ny fomba fihainanao azy ao an-trano, saingy mieritreritra aho fa azo aseho ho lalam-piofanana voalohany na ho haingo afaka iray segondra.
Tsy haiko raha efa nanandrana an'ity ianao tortilla, an'ny zucchini… Ny tsirony dia mampatsiahy ahy kely ny zarangollo, angamba izany no tiako be!
1 Zarangollo - Atody miady miaraka amin'ny tongolo, atody ary zucchini
Zarangollo dia lovia Murcian mahazatra mifototra amin'ny tongolo, zucchini ary atody. Salama sy matsiro, tena mora ampiasaina amin'ny Thermomix anay
Fotoana hiketrehana: 38M
Fotoana manontolo: 38M
400 g ny zucchini, tsy voafatotra ary tapatapahina (tsara kokoa raha avy amin'ny fambolena biolojika izy ireo)
Tongolo 400 g notapahina ho efamira
Atody 4 na 5
Apetrakay ao anaty vera sy programa ilay zucchini 2 segondra, hafainganam-pandeha 4. Esory amin'ny vera ary tahirizo.
Apetrakay ao anaty vera sy programa ilay tongolo 3 segondra, hafainganam-pandeha 4. Miaraka amin'ny spatula isika dia mampidina ny sisa tavela amin'ny tongolo avy amin'ny fonony ary avy ao anaty ny fitaratra mankany amin'ny lelany.
Ampio ny menaka sy ny sira ary ny programa 15 minitra, varoma, fihodinana havia, hafainganana sotro.
Izahay dia manampy ny zucchini, sira sy dipoavatra. Izahay dia manao fandaharana 20 minitra, maripana varoma, fihodina ankavia, hafainganam-pandrefesana.
Ampidirinay ny atody sy ny programa 2 minitra, maripana varoma, fihodina ankavia, hafainganam-pandrefesana.
Raha tiana ho hita be ny zucchini dia afaka tapaina kely kokoa isika ary / na mahandro azy mandritra ny 15 minitra fa tsy 20.
Fanazavana fanampiny - Zucchini Omelet
Loharano - Ny sakafonay isam-paritra (Catalonia, Community Valencian, Nosy Balearic ary Murcia)
Mitadiava fomba fahandro hafa momba ny: Sakafo rezionaly, Salady sy legioma, tsy mihinan-kena
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: thermorecipes » General » Sakafo rezionaly » Zarangollo - Atody miady miaraka amin'ny tongolo, atody ary zucchini
Esperanza dia hoy izy:
Avy amin'ny zaridaina martiana? Hahaha .. Azo antoka fa ho tsara kokoa ilay Murcian. Jereo fa nankany Murcia aho indraindray, saingy tsy nahafinaritra ahy ny nanandrana azy, saingy azoko antoka fa raha vao manandrana azy aho dia ho fampitaovana ao an-trano izany. Oroka!
Mamaly an'i Esperanza
Fantatrao i Esperanza, mila manandrana izany ianao, miaraka amin'ny zucchini, na avy aiza na avy aiza.
primisimo dia hoy izy:
Tsara, omaly nataoko fa nanohitra ahy kely io, mety ve satria tsy nampiasa lolo aho? sa maninona no nataoko tamin'ny thermomix taloha?
Mamaly an'i primisima
Hitranga izany ... tsy maintsy apetrakao ny throttle sy ny hafainganana 1. Ity fomba ity dia azonao atao tsara amin'ny 21. Manantena aho fa tianao izany.
Mª Jesosy dia hoy izy:
Nataoko ity fomba fahandro ity ary tena matsiro. Fomba tena tsotra hanamboarana zucchini sy miaraka amin'ireo akora izay anananao ao an-trano foana
Valio amin'i Mª Jesosy
Mazava ho azy fa tiako, tiako be koa io. Misaotra tamin'ny hevitrao MªJesús, faly aho fa tianao izany.
Muss dia hoy izy:
Izay no tiako, manao tanindrazana. Hanandrana fomba fahandro tena tsara aho, saika hitomanianao aho. Avy any Madrid, Muss
Mamaly an'i Muss
Ary hanohy hanao tanindrazana aho, mazava ho azy. Misaotra Muss. Oroka avy any Parma !!
Nivoaka somary soggy ho ahy ilay izy fa azoko endasina kely dia omena atody?
Mba tsy handotoana vilany bebe kokoa dia nesoriko ny ron-kena alohan'ny nampidirako ireo atody. Amin'izany fomba izany no hialantsika amin'ny fandotoana ny lapoaly 😉
Misaotra ny recette, mivoaka tena tsara!
Manana fanontaniana iray fotsiny aho, maninona no lasa may / mifikitra amin'ny faran'ny vera io? Manana ny TM31 aho, narahiko ny fomba fahandro an'ilay taratasy ary nandoro ny in-4 nahavita azy aho 🙁 Nanandrana nametraka menaka fanampiny aho, mba hanaitra ny ambany miaraka amin'ny spatula 2-3 mandritra ny fizotrany. ary tsy misy, may foana ...
Jereo raha misy afaka manampy ahy.
Misaotra, Julio, tamin'ny hevitrao.
Ataoko ihany koa amin'ny 31 ... Angamba miankina amin'ny zucchini izany, raha betsaka na kely ny rano ao aminy ... Andramo fandaharana minitra vitsy latsaka, jereo izay mitranga.
Fihohonana sy taom-baovao sambatra!
Salama Ascen, voalohany indrindra dia misaotra betsaka anao nandefa ny recette. Vao avy nanao an'io aho ary tena matsiro. Ny hany zavatra ary tsy fanakianana, amin'ny maha Murcian ahy aho, ary hanapahako kely ny zucchini, ary handrahoako azy koa kely kokoa ny fotoana, ka somary somary somary kely kokoa ny masoko. Ny tsiro, manankarena be.
Misaotra indrindra, Lola! Tiako ny fanehoan-kevitrao ary nampidiriko tao amin'ny fizarana "naoty" ny torohevitrao.
Lola mpitandrina dia hoy izy:
Valiny tamin'i Pastora Lola
Fihorohoroana Proteinina voavola vanila